Society Development : First and largest crowdfunding platform/online fundraising platform & website from Nepal मथुरा वि.क. को मृगौला प्रत्यारोपणका लागि आर्थिक संकलन अभियान - Society Development मथुरा वि.क. को मृगौला प्रत्यारोपणका लागि आर्थिक संकलन अभियान - Society Development
मथुरा वि.क. को मृगौला प्रत्यारोपणका लागि आर्थिक संकलन अभियान
मथुरा वि.क. को घर बान्नीगढी जयगढ गाउपालिका वडा नं. ६ दर्ना अछाम हो । उहाँको श्रीमान शेर बहादुर वि.क. भारतमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको ३ सन्तानरु छन । मथुरा वि.क. बिगत २ वर्ष देखि मृगौला रोगबाट पिडित हुनुहुन्छ । उहाँका २ वटै मृगौलाले काम गरिरहेका छैनन । औषधोपचारका लागि उहाँ र उहाँका परिवार सँग पैसा छैन । उहाँको घरको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ । उहाँको परिवार पुस्तौ देखि नै अरुको घरमा काम गर्नका लागि बस्दै आउनु भएको छ । उहाँहरुको आफ्नै घर, जग्गा जमिन छैन । मथुरा वि.क. का ३ जना छोराहरुका पढाई उहाँ विरामी भएपछि राम्रो सँग सुचारु हुन सकेको छैन । मथुराका श्रीमान शेर बहादुरले कमाएको पैसा परिवारको हात मुख जोड्नका लागि ठिक्क हुने र बचेको केही रकम मथुराको उपचारका लागि खर्चिने हुनाले पढाईका लागि पैसा अपुग भएको हो ।
हाल मथुराको ब्लु क्रस अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा हप्तामा २ पटक डायोलाईसिस हुदै आइरहेको छ । रगत र खाने औषधिको अभावका कारणले धेरै पटक डायोलाईसिस हुन सकेको छैन । जसको कारणले उहाँको स्वास्थ्य झन खराब हुदै गईरहेको छ । मथुराले आफ्नो उपचारका लागि पटक पटक सडकमा पैसा माग्दै हिड्नु भयो । डाक्टरले मथुरालाई मृगौला प्रत्यारोपणको लागि सिफारिस गरेको छ । जसको लागि चाहिने रकम उहाँको परिवार सँग छैन ।
मथुराको स्वास्थ्य सुधारका लागि मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु आवश्यक छ । उहाँका परिवारका सदस्य मृगौला दिन तयार हुनुहुन्छ । मृगौला प्रत्यारोपण र अपरेशनका लागि ठुलो धन राशिको आवश्कता पर्दछ । त्यसका लागि लगभग ८ लाख रुपैया लाग्दछ । कुनै पनि स्रोत मार्फत रकम जुटेको खण्डमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।
यो अभियान शुरुवात चलाउनुको उद्देश्य भनेको मथुरा वि.क. को शारिरीक अवस्थामा सुधार गरी स्वास्थ्य अवस्थाको विकास गर्नु हो । उहाँको शारिरीक अवस्था पुर्ण रुपले निको भए पछि उहाँ घर परिवारमा काममा फर्केर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो परिवार, समाजका साथै सम्पुर्ण राष्ट्रका लागि समेत एक उदाहरणीय हुनसक्नुहुन्छ । उहाँको स्वास्थ्य लाभ भएपछि उहाँका छोराहरुको पढाई नियमित हुनेछ । यस कार्यका लागि हामी सबैको सहयोग, सहकार्य र हातेमालोको जरुरत आवश्यक पर्दछ ।
Published Date: 30-Aug,2019
Finish Date: 31-Dec,2019
USD 2322.5 Raised of USD 7120.00 Goal